शिखर इन्स्योरेन्समा बीमा गराउँदा स्याउ किसान डूब्नबाट जोगिए, १३९१ ले पाए साढे २ करोड दाबी भुक्तानी - Aathikbazarnews.com शिखर इन्स्योरेन्समा बीमा गराउँदा स्याउ किसान डूब्नबाट जोगिए, १३९१ ले पाए साढे २ करोड दाबी भुक्तानी -
ut austin creative writing mfa similarities between creative writing and professional writing resume and cover letter maker best creative writing program australia uw creative writing mfa creative writing prompts for bloggers doing homework during class custom writing service uk traduccion de you do your homework cca algebra homework help 11 creative writing help creative writing marking scheme business plan proposal writing creative writing course what to expect pictures prompts for creative writing does homework help with tests homework help bradford help to writeawedding speech creative writing stage3creative writing do nows essay outline maker online youtube creative writing prompts how does homework help with organisation i need help on my homework maplestory business plan price list creative writing cal state fullerton write help for english essay purdue creative writing club holderness i can't help with homework what do you do your homework
शिखर इन्स्योरेन्सले मौसम सुचकांकमा आधारित स्याउ खेतीको बीमा गरेका कर्णालीका किसानलाई साढे रु. २ करोड ५५ लाख बराबरको दाबी रकम भुक्तानी गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट र मुगुका गरी १ हजार ३ सय ९१ जना किसानलाई २ करोड ५५ लाख दाबीभुक्तानी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
जुम्ला जिल्लामै सबैभन्दा बढी ७ सय बिरुवाको बीमा गराउने पातारासीका किसान अधिराज विष्टले १ लाख ८९ हजार बराबरको भुक्तानी रकम बुझेका छन् । भुक्तानी पाएपश्चात विष्टले शिखर इन्स्योरेन्सले समग्र कर्णालीका किसानको मर्म र सहायताका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
जुम्लामा ७ सय ४७ जना किसानले ४९ हजार बिरुवाको बीमा गराएका थिए । जुम्लामा मात्र प्रति बिरुवाद रु. २ सय ७० रुपैयाँका दरले १ करोड बीमा दाबी रकम भुक्तानी गरिएको छ । यसैगरी, प्रति बिरुवा २ सय ७० रुपैयाँका दरले कालिकोटका ३ सय २६ किसानले ७० लाख २० हजार दाबीभुक्तानी पाएका छन् । कालिकोटमा ३ सय २६ जना किसानले २ हजार ६ सय बिरुवाको मौसमी सुचकांकमा आधारित स्याउ बीमा गराएका थिए । यस्तै मुगुका ३ सय १८ जना किसानले १ हजार ९ सय बिरुवाको बीमा गरे बापत रु. ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाएका छन् ।
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यलय जुम्लाले बीमा गरेका किसानलाई घरदैलोमै गएर क्षतिपूर्ति रकम अर्थात दाबी भुक्तानी दिएको बीमा कम्पनीका कर्णाली इन्चार्ज ऋषिराम पाण्डेले बताए । कर्णालीका किसानहरुले गत वर्ष नै स्याउ फल्ने बेला स्याउ खेतीको बीमा गरेका थिए । सोही बीमा गराएका कारण उनीहरुले अहिले दाबीभुक्तानी पाएका हुन् ।
असिना र सुख्खा खडेरीले क्षति पुर्याएको तथा स्याउ उत्पादन घट्दा घाटा व्यहोरेका किसानले बीमा रकम पाउँदा राहत महसुस गरेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्सले ५ वर्ष अगाडि मौसमी सूचकांकको आधारमा गरिने बीमामा स्याउ खेतीका लागि नै भनेर कर्णाली प्रदेशमा यो बीमा पोलिसी सुरु गरेको थियो । गएको ३ वर्षयता हरेक वर्ष शिखर इन्स्योरेन्सले स्याउ किसानहरुलाई दाबीभुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश पाउने दुई कम्पनीले डाके साधारणसभा, केन्द्रले १५ र एनबीआइले ५% नगद दिँदै